प्रहरीले खुलायाे यस्ताे रहस्य – Sudarshan Khabar
कात्तिक ६ गते पर्साको विन्दबासिनी गाउँपालिकामा नेकपा गाउँ कमिटीको सपथग्रहण कार्यक्रममा पार्टीकै दुई पक्षबीच झडप भयो । झडपमा परेर गाउँ सचिव मुकेश चौरसियाको मृत्यु भयो । मृतकका आफन्तले १२ जना विरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गर्न खोज्दा प्रहरीले सुरुमा जाहेरी लिएन ।
आखिर प्रहरीले किन जाहेरी नलिएको होला ? जाहेरी नै लिन नमान्ने प्रहरीले घटनाको निष्पक्ष छानवीन गर्छ भन्ने कुरामा कसरी विश्वास गर्ने ? पीडित पक्षले उठाइरहेका यिनै प्रश्नहरुको सेरोफेरोमा रहेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साकी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक गंगा पन्तसँग अनलाइनखबरकर्मी सुरेश बिडारीले गरेको कुराकानी:-
जाहेरी लिन्नँ भनेर निषेध गरेको होइन । जुन कुरा प्रत्यक्ष खुलेको छ, त्यो कुरा माथि लेख्नुस, आफूलाई लागेको कुरा तल उल्लेख गर्नुस् भनेका थियौं । तर, उहाँहरु मान्नुभएन । एकपटक आएपछि दोस्रोपटक उहाँहरु दर्ताका लागि आउनु नै भएन । त्यसले गर्दा बाहिर जाहेरी नै दर्ता भएन भन्ने सन्देश गएको हो । तर, सत्य के हो भने प्रहरीकोमा आएका ९९ प्रतिशत मुद्दामा रि-थिंक गराउनुपर्ने हुन्छ ।
कतिपय मुद्दामा झुठो जाहेरी आउँछ । कतिपयमा संलग्न भएका व्यक्ति भन्दा आफ्ना विरोधीलाई समेत राखेर ल्याउँछन् । प्रहरीको फाइदाका लागि हैन, समुदाय र आम नागरिकको फाइदाका लागि र सिस्टम नबिगि्रयोस् भन्ने हिसाबले त्यसो गछौर्ं । जे लगे पनि प्रहरीले दर्ता गर्दैन, प्रहरीले पनि हेर्छ भन्ने जनमानसमा परोस् भनेर त्यसो गरिरहेका हुन्छौं ।
पहिलो दिनको कुरा अलि फरक छ । व्यक्ति सख्त घाइते मात्रै भएको अवस्था थियो । दुःखको कुरो, पछि उहाँको निधन भयो । त्यसबेला हामीकहाँ जे सूचना आएको थियो, त्यसैका आधारमा शंकास्पद व्यक्ति भनेर ८ जनालाई नियन्त्रणमा लिएका थियौं । उहाँहरुले फलानो-फलानो व्यक्ति संलग्न छैनन् भनेपछि बाँकी ६ जनालाई छाडेका हौं ।
प्रहरीलाई कसले कसरी लिन्छ, त्यो त उहाँहरुको कुरा हो । तर, प्रहरीले जसरी काम गर्नुपर्ने हो, त्यसरी गर्छ । शंका गर्नुपर्ने अवस्था छैन । अनुसन्धान पूरा भएपछि कसैले प्रश्न उठाउन सक्ने ठाउँ रहँदैन ।
कुन पक्षका मानिस छन् भन्दा पनि व्यक्तिको मृत्यु भएको छ, एउटा पक्ष पीडित छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा अपराधिक घटनाका रुपमा अगाडि लैजाने हो । यहाँ राजनीतिक द्वन्द्व आदि-इत्यादि कुरा छन्, त्यो उहाँहरुबीचको कुरा हो । प्रहरीको चासो छैन, रहँदैन पनि । त्यसले अनुसन्धानमा कुनै असर पार्दैन ।